Alarobia tsy miverina | NewsMada
Alarobia tsy miverina
Par Taratra sur 26/11/2019
Hametraka tantara goavana eo amin’ny fiainam-pirenena ny alarobia 27 novambra 2019. Ho fantatra eo indray mantsy ireo hitantana ny tanàna tsirairay eto Madagasikara. Hifidy izay ho ben’ny Tanàna ny vahoaka malagasy. Hitodika eto avokoa ny mason’izao tontolo izao. Alarobia tsy miverina, saingy alarobia manana ny lanjany.
Eny am-pelatanan’ny tsirairay manan-jo handatsa-bato ny hoavin’ny tanàna. Hiankina betsaka amin’ny fahaiza-mifidy ny hampandroso na hamotika ny toerana onenan’ny vahoaka. Mila fifantohana ny vato alatsaka, tsy hisian’ny fanenenana satria alarobia tsy miverina io.
Efa betsaka izay fifandresen-dahatra izay, maro ny fifampiresahana, tsy voatanisa ny fampanantenana. Any amin’ireo olona 18 taona no ho miakatra ny fanapahan-kevitra farany. Hilaza ny marina ny vata fandatsaham-bato amin’ny alarobia tsy miverina. Fahamarinana tsy azo ivalozana ary irina hoeken’ny rehetra satria alarobia tsy miverina io, ho an’ity taona efa madiva hifarana ity.
Fantapantaro àry ny anarany, vinavinao ny laharany. Aoka mba ho ilay nomerao mahazo no hivoaka eo amin’ny valim-pifidianana fa tsy sanatria tarehimarika diso, ary tsy tao anaty kajy velively ka izay vao ho lasan’ny alarobia tsy miverina. Tsy misy izay tsy mieritreritra ny hanova ny fiainany ho amin’ny tsaratsara kokoa. Manantena sady miandrandra izany fatratra ny ambanilanitra, amin’ity fifidianana indray mitoraka ity.
Mila fahavitrihana ny fanovana fa tsy vitan’ny tsetsetra sy fanaovana ariary zato am-pandriana fotsiny. Alarobia tsy miverina ity ka tsy maintsy efaina ny adidy satria tsy olon-dratsy. Tsy hifandatsa na hifanome tsiny ao aoriana ao, raha toa ka ny tsy fandehanana mandatsa-bato no hany hampikororosy ny tanàna izay vao hiloa-bava hoe: “matinao aho ry alarobia tsy miverina”.